တႈဆ႕ကတီႈတႈအိဥသးဆီတလဲအသးဒီး ကီႈလ႕အတုႈဘဥ၀ဲ တႈကီတႈခဲတဖဥ ဒီး လ႕ကီႈပဎီၚအပူၚ မ့ႈ၀ဲခံတပတီႈအဂ့ႈ ၁၀/၈/၂၀၂၀ | Radio Veritas Asia
တႈဆ႕ကတီႈတႈအိဥသးဆီတလဲအသးဒီး ကီႈလ႕အတုႈဘဥ၀ဲ တႈကီတႈခဲတဖဥ ဒီး လ႕ကီႈပဎီၚအပူၚ မ့ႈ၀ဲခံတပတီႈအဂ့ႈ ၁၀/၈/၂၀၂၀
ကီႈတဘ့ဥဒီတဘ့ဥမူခိဥကလံၚသီဥဂီၚ တႈဆီတလဲအသး ပထံဥဘဥတႈကီတႈခဲဟဲအိဥထီဥ
အသးန႔ဥလီၚ.ကီႈပဎီၚအပူၚစ့ႈကီး ပထံဥဘဥအိဥ၀ဲဒဥလီၚ ဆ႕ကတီႈအခဲအံၚ မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚ ဆီတလဲသးအဃိ ကီႈအဘ့ဥတဆံန႔ဥ တူႈဘဥ၀ဲတႈကီတႈခဲဒိဥဒိဥမုႈမုႈလီၚ. ဒီးလ႕ကီႈပဎီၚအပူၚ အိဥစ့ႈကီး၀ဲ နီဥဂံႈခံအဃိ ပွၚကြႈမူခိဥကလံၚသီဥပွၚကူဥဘဥကူဥသ့ (ဒီၚတၚထိလြ႔ၚ)တဲဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥ
န႔ဥလီၚ ပူၚကြံဏအနံဥ ဖဲ ၁၉၈၀အနံဥ အလီႈခံန႔ဥ ဟီဥခိဥအတႈကိႈအံၚ ဟဲအါထီဥ၀ဲဒဥတစဲးဘဥတစဲး တႈကိႈအံၚအါထီဥဒီး မ့ဥအူအီဥကြံဏ၀ဲပွႈလဏက်ါ မဲးမုႈခိဥသ့ဥတဖဥအါထီဥ၀ဲဒဥ ခိဥဃ႕ၚသ့ဥတဖဥ ဘဥဒိ၀ဲ ဟီဥခိဥမဲဏဖံးခိဥ အိဥ၀ဲ ၂၀ မ်းကဎၚဒီး တႈအခ်ံႈကတ႕ႈမ့ႈ၀ဲ (ျမ႔ၚဆံၚလြါၚ) လီၚဘွ႔ဥ၀ဲဒဥ (မံၚသ့)အတႈသ၀ံသ့ဥတဖဥဟဲအိဥထီဥ၀ဲ တႈကိႈစ့ႈကီး ဟဲအါထီဥဒီးအါထီဥ၀ဲဒဥကြ႔ႈကြ႔ႈ ဒီး ဘူးထီဏလ႕တႈဆ႕ကတီႈ ကဟးဂုဏဟးဂီၚ၀ဲဒီးပသ့ဥညါဘဥလီၚ.
တႈခံ်ႈကတ႕ႈလ႕အမ့ႈ (ျမ႔ၚဆံၚလြါၚ)န႔ဥ အထံကဟဲလီၚဘွ႔ဥ၀ဲဒဥန႔ဥ တႈအ၀ဲအံၚ လ႕ပကဘဥပ႕ၚဃဏအီၚ လ႕က်ဲဒ္လဲဥန႔ဥတအိဥဒံး၀ဲဘဥ. ဟီဥခိဥအတႈကိႈအံၚ ကလီၚစွၚ၀ဲအဂီႈ တႈလ႕ပမၚဟးဂုဏဟးဂီၚသ့ဥတဖဥ ကဘဥၾတီဃဏအီၚလီၚ. တႈကိႈဆ႕ကတီႈဟဲအါထီဥ တႈအခ်ံႈလ႕အအိဥလ႕(ျမ႔ၚဆံၚလြါၚ) အထံလီၚဘွ႔ဥ (မံၚသ့) အတႈသ၀ံအိဥထီဥ ဟီဥခိဥအံၚကိႈ၀ဲ ဒီး မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚ ဆီတလဲအသး တႈအံၚလဲၚတရံးအသးဒ္ တႈက၀ီၚတခါလီၚ.
မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚတႈကီတႈခဲဟဲအိဥထီဥဒီး ဖဲ၂၀၁၂အပူၚ ကီႈအဘ့ဥတဆံအံၚ တုႈဘဥ၀ဲဒဥဒီးကီႈပဎီၚ အပူၚမ့ႈစ့ႈကီး နီဥဂံႈခံဒီး ဖဲ ၂၀၁၈ နံဥန႔ဥအိဥစ့ႈကီး၀ဲဒ္အလီႈလီႈဒီး (ဒီၚတၚထိလြ႔ၚ)တဲ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.
အခဲအံၚကီႈပဎီၚအပူၚန႔ဥ မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚတႈဆီတလဲအသး တႈကီတႈခဲ လ႕ဟဲဖ်ါထီဥအံၚန႔ဥ ပထံဥဘဥ၀ဲဒီး မုႈနံၚလ႕ကဟဲ အဒိဥအမုႈ ဟီဥခိဥဒီဖ်႕ဥအတႈအိဥသး သ့ဥတဖဥ ပကဘဥၾတီဆ႕
ဒီသဒ႕တႈကီတႈခဲအံၚ ကီႈခိဥပွၚဘဥမူဘဥဒါ တဲဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ
တႈကီတႈခဲအံၚ ပမ့ကြႈ တ႕တခါန႔ဥ ပွၚကညီသ့ဥတဖဥအိဥဖွိဥလိဏအသးယပဏဖွိဥလိဏအသးယထုးထီဥ၀ဲဒဥက်ိခ်ံ၀ဥသဥ သ့ဥတဖဥအတႈဂ့ႈန႔ဥလီၚ. တႈဂ့ႈအ၀ဲအံၚ ခါဆူညါ ကဲထီဥက့ၚဟီဥခိဥအတႈကီတႈခဲန႔ဥလီၚ. လ႕အဂၚတခါန႔ဥ ပထံဥစိကြႈတဖ်ါဘဥ လ႕အမ့ႈ မူခိဥကလံၚအတႈဆီတလဲအသး အဂ့ႈန႔ဥလီၚ.